ကုမ္ပဏီအကျဉ်းချုပ် - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO ။ , LTD
Ouzhan Trade (Shanghai) Co. , Ltd. သည်ရှန်ဟိုင်း၊ Jinshan ခရိုင်၊ အမှတ် ၅၀၀၊ Zhenkang လမ်း၊ Jinguo စက်မှုဥယျာဉ်၊ အဆောက်အအုံ ၃၈ တွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရှန်ဟိုင်းတွင် CNC စက်တွင်အတွေ့အကြုံ ၁၅ နှစ်ကျော်ရှိသည်။ အလှည့်အလှည့် - ကြိတ်ခွဲစက်၊ CNC စက်၊ ၄/၅ ၀ င်ရိုး CNC စက်၊ မြေမျက်နှာပြင်ကြိတ်ခြင်း၊ လေဆာဖြတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်squareရိယာ (၁၂၀၀) စတုရန်းမီတာကျယ်ဝန်းပြီး ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃၀၊ နည်းပညာဆိုင်ရာမန်နေဂျာ ၁၀ ဦး၊ အရည်အသွေးရှိသောစစ်ဆေးရေး ၅ ဦး ဖြစ်သည်။ အဓိကထုတ်ကုန်သုံးစက် ၃၀ ကျော်။
1. CNC စက်၏ထင်ရှားသောအင်္ဂါရပ်များ
ဤနေရာတွင်မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာ CNC စက်ကိရိယာများကိုအများအားဖြင့်အလိုအလျောက်ကိရိယာပြောင်းလဲမှုကိုင်ဆောင်ထားသူနှင့်ရရှိနိုင်ပြီးပရိုဂရမ်မှထိန်းချုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်သည်သဘာဝတွင်ပိုမိုအာရုံစိုက်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ CNC စက်အားလုံးတွင်အီလက်ထရောနစ်တိုင်းတာသည့်စနစ်ကိုထိန်းချုပ်ထားသော ၀ င်ရိုးတစ်ခုစီတွင်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါတိုင်းတာစနစ်များကိုများသောအားဖြင့်ဆလိုက်ဝေးအပေါ်တစ် ဦး ဆလိုက်၏ positioning ကိုဖော်ထုတ်ရန် CXNC စက်တွေမှာအသုံးပြုကြသည်။
ထိုစနစ်များသည်ဗိုင်းလိပ်တံကိုဇယားဆွဲ။ အမှန်တကယ်ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်းကိုတိုင်းတာရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ CNC ထိန်းချုပ်မှုများသည် CNC စက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ အသစ် CNC ထိန်းချုပ်မှုစက်လည်ပတ်မှုစင်တာများလှည့်နှင့်ကြိတ်နှင့်ပတ်သက်သောရိုးရှင်းသော application များအတွက်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုများပိုမိုမြန်ဆန်သောနေရာများ interpolate နိုင်အောင်, အမျိုးမျိုးသောပုဆိန်များပိုမိုတိကျသောထိန်းချုပ်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။ CNC စက်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုကြည့်ကြရအောင်။
ဤနေရာတွင်ဖော်ပြရမည်မှာသင်ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ချောဆီအရည်ကြည်ဇယားပေါ်တွင်မှီခိုသောစက်ကိရိယာတစ်ခုမှရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုရရှိနိုင်သည်။ ဒါဟာလေ့သတိထားမိအချက်ဖြစ်ပါသည်, ဝက်ဝံမှမလုံလောက်သောချောဆီကိုသူတို့ကိုအချိန်မတန်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ချောမွေ့သောချောဆီများလည်းလမ်းကြောင်းရထားလမ်းများကိုလည်းပျက်စီးစေနိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ချောဆီအရည်ပျော်မှုလုံးဝမရှိခြင်းကြောင့်စက်၏တည်ငြိမ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။
များသောအားဖြင့် CNC စက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုပြုပြင်ရန်မှာအတော်လေးစျေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုချောဆီယမ်ယန္တရားတပ်ဆင်ထားသော CNC စက်များကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သဘာဝကျသည်။ ၎င်းကိုအလိုအလျောက်ချောဆီဟုလည်းခေါ်သည်၊ ၎င်းကိရိယာ၏အသီးအသီးတစ်ခုစီကိုဗဟိုမှောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ချောဆီဖြန့်ပေးစက်သည်အသီးတစ်ခုစီအတွက်ပရိုဂရမ်နှင့်ဖိအားပေးသောရေနံကိုအလိုအလျောက်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
စမ်းသပ်မှုဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးနောက်တွင်၊ CNC စက်များ၏ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုကိုအရေးကြီးသောအချိန်ကိုသက်သာစေရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ထိုဖြစ်စဉ်ကိုအခြားအလားတူအစိတ်အပိုင်းများ၏နောက်ဆက်တွဲအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက် template ကိုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်စီအင်စီစက်များ၏အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းအနှံ့အပြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစီးဆင်းမှုကိုလွယ်ကူစေသည်။
4. CNC စက်အတွက်ဗိုင်းလိပ်တံရွေးချယ်စရာ
ဆက်စပ်မှုမှာဗိုင်းလိပ်တံနှင့်ပတ်သက်သော ၃- ၀ င်ရိုးနှင့် ၅-axis CNC စက်နှစ်ခုလုံးတွင်ရွေးချယ်စရာများကျယ်ပြန့်စွာရှိသည်။ HSD နှင့် Perske ဗိုင်းလိပ်တံများသည် CNC စက်၏နယ်ပယ်တွင်ကြီးမားသောထိခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ထိရောက်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်သင်၏အကောင်းဆုံးတိကျမှုကိုအာမခံခြင်းဖြင့်ဝန်များကိုယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင်လေဆာပန့်များသည် CNC စက်များတွင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖုန်စုပ်စက်များသည် CNC စက်တပ်ဆင်ရာတွင်အားနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုပေးသည်။
5. အလိုအလျောက် tool ကိုအရှည်အခြေချ
အလိုအလျောက်သုံးသည့်ကိရိယာအရှည်သတ်မှတ်သူများသည် ၀ င်ရိုးအလွှာသုံးစီနှင့် ၅ လုံး ၀ စီဒီစီစက်များကိုပိုမိုထိရောက်စေသည်။ အရှည်တိုင်းတာခြင်းစနစ်များကိုအလွန်တိကျမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အလိုအလျောက်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် tool ၏ရွေးချယ်မှုကိုစီမံပေးသော M-Code တစ်ခုတည်းပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင် tool ကိုတိုင်းတာခြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ tool ကို positioning ကိုအလိုအလျှောက် tool ကိုအရှည် setters ၏အကူအညီဖြင့်အသေးစိတ်ညှိနိုင်ပါတယ်။ စာမေးပွဲစက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါ, တစ် ဦး ချင်းတိုင်းတာ tool ကိုအရှည် Fagor tool ကို offset စားပွဲပေါ်မှာအလိုအလျောက်သိုလှောင်ထားပါတယ်။
6. Fagor ထိန်းချုပ်မှု
Fagor ထိန်းချုပ်မှုများသည် ၀ င်ရိုးနှင့် ၃ ၀ င်ရိုး CNC စက်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ CNC စက်အများစုသည်ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုတပ်ဆင်ထားသော်လည်းအခြားထုတ်လုပ်သူများသည်၎င်းကို CNC စက်များတွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းမထားပါ။ သင်၏ CNC စက်တွင် Fagor ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါက၎င်းကိုမည်သည့်တတိယပါတီမှပေးသွင်းသူမှမဆိုဝယ်ယူခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
တိကျစွာပြောရလျှင် CNC စက်၏ runtime environment သည်အလွန်အမင်းအလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်အရည်အသွေးကိုကောင်းစွာအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် CNC နှင့်သက်ဆိုင်သောစက်လုပ်ငန်းစဉ်များသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်းများအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အစမစတင်မီစမ်းသပ်မှုများသည်သင့်အားအခက်အခဲများစွာမှကယ်တင်လိမ့်မည်။
1. Ouzhan တွင်အဆင့်မြင့် CNC စက် ၃၀ ကျော်ရှိသည်။ အများစုမှာဆွစ်ဇာလန်နှင့်ဂျပန်မှတင်သွင်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျမှုသည် ၀.၀၁ မီလီမီတာဖြစ်သည်။
2. Ouzhan တွင်အလုပ်သမား ၃၀ ကျော်ရှိပြီး ၁၀% ကျော်သည်မဟာဘွဲ့နှင့်ဆရာဝန်ဘွဲ့များရရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာ ၁၀ ဦး သည်စက်ယန္တရားကိုအထူးကျွမ်းကျင်သည့်ထိပ်တန်းတရုတ်တက္ကသိုလ်များမှဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးကျွမ်းကျင်သောအသိပညာဗဟုသုတများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ထမ်းများသည်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်သောဘွဲ့ရများ၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဌာနနှစ်ခုသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ကူညီ။ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ ။
၃။ Ouzhan တွင်ကိုယ်ပိုင် CNC စက်စက်ရုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ရှန်ဟိုင်းတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတများစွာကို အသုံးပြု၍ CNC စက်လုပ်ငန်းတွင်ဖောက်သည်များစွာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Trutzschler, iGuzzini, SafeFire, FujiXerox, Ghrepower, Reco စသည်။